Ɔkokodurufo Yonatan Dii N’adamfo Dawid Nokware | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Cinyanja Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Yonatan Wɔ Akokoduru na Ɔyɛ Ɔnokwafo
Ɔhene Saul ba panyin ne Yonatan. Ná onim sɛnea wodi ako, na na ɔwɔ akokoduru paa. Dawid kaa sɛ, Yonatan ho yɛ hare sen ɔkɔre, na ne ho yɛ den sen gyata. Da bi, Yonatan huu Filistifo asogyafo 20 wɔ bepɔw bi so. Ɔka kyerɛɛ ne somfo a okura n’akode no sɛ: ‘Sɛ Yehowa ma yɛn sɛnkyerɛnne bi nko ara a, yɛne wɔn bɛko. Sɛ Filistifo no ka sɛ yɛmmra a, ɛbɛma yɛahu sɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔ wɔn so.’ Filistifo no teɛɛm sɛ: ‘Mommra ma yɛnko!’ Enti mmarima mmienu no foroo bepɔw no, na wokodii asogyafo no so nkonim.
Esiane sɛ na Saul ba panyin ne Yonatan nti, sɛ Saul wu a, na Yonatan na obedi n’ade. Nanso na Yonatan nim sɛ Yehowa apaw Dawid sɛ Israel hene a odi hɔ. Ne nyinaa akyi, Yonatan ani ammere Dawid. Yonatan ne Dawid faa adamfo denneennen. Wɔn mmienu nyinaa hyɛɛ wɔn ho bɔ sɛ obiara bɛbɔ ne yɔnko ho ban na wɔaboa wɔn ho wɔn ho. Yonatan de n’atade nguguso, ne nkrante, n’agyan, ne n’abɔso anaa ne bɛlt maa Dawid de kyerɛɛ sɛ ampa wɔyɛ nnamfo.
Bere a Saul nti Dawid reguan no, Yonatan kɔɔ Dawid nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Ma wo bo nyɛ duru na nya akokoduru. Yehowa ayi wo sɛ wobɛyɛ Israel so hene. Me papa koraa nim saa.’ Wowɔ adamfo pa te sɛ Yonatan a, anka wompɛ?
Yonatan de ne nkwa too ne nsam boaa n’adamfo Dawid mpɛn pii. Ná onim sɛ Ɔhene Saul pɛ sɛ okum Dawid, enti ɔka kyerɛɛ ne papa Saul sɛ: ‘Wukum Dawid a, woayɛ bɔne. Ɔnyɛɛ bɔne biara.’ Saul bo fuw Yonatan paa. Mfe bi akyi no, Saul ne Yonatan kɔɔ ɔko, na wowui.
Yonatan wui akyi no, Dawid hwehwɛɛ Yonatan ba Mefiboset. Bere a Dawid huu Mefiboset no, ɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Ná wo papa yɛ m’adamfo paa, enti wo nkwa nna nyinaa mɛhwɛ wo. Wobɛtena m’ahemfie na wubedidi me pon so.’ Dawid werɛ amfi n’adamfo Yonatan da.
“Monnodɔ mo ho sɛnea medɔ mo no. Obiara nni ɔdɔ a ɛsen eyi, sɛ obi de ne kra bɛto hɔ ama ne nnamfo.”​—Yohane 15:12, 13
Nsɛmmisa: Dɛn na Yonatan yɛ de kyerɛɛ sɛ ɔwɔ akokoduru? Dɛn na Yonatan yɛ de kyerɛɛ sɛ ɔyɛ ɔnokwafo anaa adamfo pa?
Dawid Ho Bible Krataa
Ebia woate Dawid ne Goliat ho asɛm da. Nanso, nneɛma foforo pii wɔ hɔ a Dawid yɛe.